Paddy ka Ichekwa Williams na Austrian GP
October 21, 2016 Site Olympic Matt
F1 si German TV oru mgbasaozi n'ikuku na-esi ọnwụ na ha anọgide na nkọ na-egwu egwuregwu na tiivi. Nke ugbu a contracts-ekubi ume na njedebe nke afọ a.
Ma a ọnụ na-ekwuru Sky Deutschland gwara Speed ​​Week: “Anyị na-akpọsa ihe, mgbe e nwere ihe ịkpọsa.
“Ma anyị na-eme ọ bụla na nzuzo nke eziokwu na, ọbụna mgbe 20 afọ, anyị na-ahụ usoro na otu onye bụ a oké egwuregwu na anyị nwere mmasị iso a mmekorita.”
Na a ọnụ na-ekwuru free-na-ikuku n'ikuku RTL kwukwara: “Anyị na mkparita uka na-adịghị na-eche nrụgide. The okwu nwere ike theoretically anọgide ruo mgbe ọgwụgwụ nke afọ.”
Ka ọ dịgodị, Mercedes otu onyeisi Toto Wolff na-ekwu na e nweghị ihe ịrụ ụka na, ọ bụ ezie na Germany na-efu site 2015 kalenda, ọ ga-azụ ọzọ oge.
Christian Horner ka kwetara nkume mmekọrịta dị n'etiti Red ehi na Renault bụ n'ihi na a ọnwụ nke “ndidi”.
“A otutu e kwuru na e dere banyere mmekọrịta dị n'etiti Red ehi Racing na Renault,” o kwetara na N'ajụjụ ọnụ France si Nchekwa onwe Hebdo.
N'ezie, otu onyeisi Horner kwuru, bịa n'oge a nke ọma n'ihu ọha crossroads, dị ka Renault a na-atụle ịzụ Lotus otu, mgbe Red ehi bụ kọrọ na okwu na Ferrari na Mercedes.
Jụrụ ihe ga-eme ma ọ bụrụ na Renault doo F1 kpam kpam, na Briton zara: “Ọ bụrụ na anyị na-enweghị ike ịgbanwe ọzọ ika nke engines, mgbe ahụ, anyị ga-ahapụ egwuregwu” nakwa.
Dị ka Red ehi ọrụ na nwere mbịne Renault pụọ, Horner kwuru Cyril Abiteboul n'ezie masterminded a “nnukwu-ọnụ ọgụgụ nhazigharị”, na fevered ọrụ na-ewere ọnọdụ na Viry.
Mgbe akpọ abụọ omume ugha ka Sebastian Vettel na Kimi Raikkonen n'oge mmalite nkebi nke oge, Felipe Massa na Valtteri Bottas abatawo ha onwe ha na-adịbeghị anya grands prix.
Massa ekwu na otu mbụ ikpo okwu nke 2015 Mgbasa Ozi na Austrian Ukwu Prix mgbe Brazil mere a Williams 1-2 n'oge mbụ stint na British GP oge ikpeazụ si.
Otú ọ dị, otu efu ụzọ ha ubé ruru oyi ọnọdụ na Silverstone na Vettel ekwu atọ ebe n'azụ Mercedes ụgbọala mgbe na-eme ka mma usoro oku.
Ọ pụtara Williams ka na- 60 ihe n'azụ Scuderia na standings, ma isi nke ịrụ ọrụ injinịa Rob Smedley ele na ha nwere ọkụ ugbu a, ma ha na- ka e gosiri na atọ site Paddy Ike.
“Anyị na-mgbe niile na-eweta ọhụrụ ibe n'ibe ọ bụla ebube prix na ebe niile nke ụgbọ ala,” ọ gwara Autosport. “The otu na-emepe emepe ụgbọala na obere incremental nzọụkwụ na e nwere ihe ọzọ na-abịa.
“Anyị na-agbalị ọzọ na ndị ọzọ na-etinye onwe anyị n'ime a ọzọ mma ọnọdụ dị ka anyị chọrọ na-agbalị na-esi abụọ itie ke Asọmpi Onye Mmeri – na bụ anyị lekwasịrị ugbu a.”
Williams setịpụrụ nlegharị anya na Ferrari
The German Ukwu Prix ga-alaghachi usoro Otu kalenda oge ọzọ, dị ka Mercedes motorsport onyeisi Toto Wolff.
Na-agba ọsọ esesịn e kwukwara na 2016 provisional schedule which was released by the FIA last week. But uncertainty still surrounds the grand prix after this year’s race, nke mbụ e dere na maka July 19, e wetara gburugburu ihe isi ike ego na March.
Mercedes isi Wolff (ekpe) (na Niki Lauda, nri), says the German Grand Prix will return next year. Nico Rosberg celebrates his win in the last Grand Prix in his homeland, na 2014
Lewis Hamilton looking glum with Rosberg after coming third at Hockenheim in 2014. It marks the first time in 55 afọ na a usoro Otu agbụrụ e haziri na Germany.
'E nwere onye mmetụta na Mercedes si adịkwa German Ukwu Prix ma, dị ukwuu dị ka ọ bụ ihe ihere na anyị nwere ike na-egosi na-egosipụta anyị ụgbọala n'ihu anyị Fans na Daimler ibe, anyị ga-enwe n'ebe n'afọ ọzọ.’
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Usoro 1, Moto egwuregwu, Sports Guff